हाम्राे पिपलबाेट » कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष चलाउनेका साढे तीन वर्ष कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष चलाउनेका साढे तीन वर्ष – हाम्राे पिपलबाेट
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष चलाउनेका साढे तीन वर्ष
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं.१० का निर्वाचित वडा अध्यक्ष निम बहादुर चलाउने( निरज)ले आफ्नो जिम्मेवारी पाएसंगै कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० लाई विकासको मुहार फेर्ने गतिमा अग्रसर भएको छ । वडाका ५ जना जनप्रनिधि यहाँको विकास कार्य, जनताका प्रत्यक्ष सवालमा अहोरात्र खटिने गरेका छन । कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नं १० साबिक कोहलपुर गाउँ विकास समितिका वडा नं. १ र २ मिलेर बनेको हो । ७ हजार ३ सय ७७ जनसंख्या रहेको उक्त वडा १३.२४ वर्गमिटरमा फैलिएको छ । वडा भित्रको विकास समृद्धीको लागि अध्यक्ष चलाउने निरन्तर लागी परेका छन् । वडा भित्र हरेक विकासका पूर्वाधार , शिक्षा,स्वास्थ्य खानेपानी , कृषि,रोजगार लगायतका थुप्रै समस्याहरुलाई समाधानको बाटोमा वडा अध्यक्षको निकै अग्रसरता रहेको छ ।
शिक्षामा सुधार :
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० मा १ प्राथमिक तह र १ माध्यामिक तह गरी २ वटा विद्यालय रहेका छन् । २ करोड भन्दा माथी प्रदेश सरकार र संघबाट विशेष अनुदान ल्याउन कोहलपुर नगरपालिका सफल भएको थियो । माध्यामिक विद्यालय तर्फ कोहलपुरकै नमूनाको रुपमा मानिएको त्रिभूवन माध्यामिक विद्यालय सोही वडामा रहेको छ । वडाभित्र रहेका सरकारी स्कुलहरू, आधारभूत विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि यहाँको शिक्षाको विकासमा होडबाजी चलेको वडा अध्यक्ष चलाउने बताउँछन । शिक्षामा विभिन्न हरेक आर्थिक वर्षमा लगानी भएका छन् । जसले यहाँको शिक्षा र शैक्षिक संघसंस्थाको विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको छ । विद्यालयमा पर्खाल निर्माण शुद्ध पिउने पानी ,भवन निर्माण गरिएको चलाउनेले बताए । यी बाहेक यो वडाको शिक्षामा विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक लक्षित गरी सहयोग आदानप्रदान र लक्षित गरी सहयोग आदानप्रदान र सहकार्य भएका छन् । शैक्षिक सामगी वितरणदेखि यहाँका खेलमैदान निर्माणमा सहकार्य भएका छन् । वडाका जनप्रतिनिधिको आफ्नै व्यक्तिगत सहयोग र अन्य जिल्ला तहका स्थानीय र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको सहकार्यमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यहरू भएका छन् । सडक निर्माणलाई प्राथमिकता हरेक गाउँ घरहरूलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी वडाका जनप्रतिनिधि सडक विस्तार, निर्माण र स्तरोउन्नतिमा लागेका छन् । भएका सडकको फराकिलो, ग्राभेलिङ १० किलोमिटर र कालोपत्रे ३ किलोमिटर बनाउने अभियानमा जनप्रतिनिधिहरू लागेका छन् । अहिलेसम्म यो वडामा सडकमा सबैभन्दा धेरैै बजेट लगानी भएको छ ।
बिराट खानेपानी उपभोक्ता संस्था संग सहकार्य गर्दै वडा नं. १० मा रहेका सम्पूर्ण घरधुरीहरुमा शुद्धखानेपानी पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । आफ्नो कार्यकालमा हरेक घरधुरीहरुमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य समेत वडा कार्यालयले राखेको छ ।
पर्यापर्यटनमा टेवा पु¥याउने उदेश्यका साथ कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको चटारमा ३० बिगाह जमिन डिपिआर समेत भइसकेको छ । स्थानियबासिन्दाहरुले उत्पादन गरेका कृषि बस्तुहरुको बिक्री तथा बजारीकरण गर्ने योजना अगाडी बढाएको छ ।जसका कारण उक्त चटार क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा परिचित गराउनका लागि कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. निरन्तर लागि परेको छ ।
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० डुबानका साथै डुडुवा खोलाले कटान गरि खेतीयोग्य जमिन कटान् गर्ने समस्याको समधानका लागि करिब ९० लाख बराबरको लागतमा तडबन्ध कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको छ । उक्त बजेट अभाव भएको र थप बजेटको माग केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई गरिएको छ । उक्त तडबन्धले कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० का कृषि क्षेत्रमा आवद्ध भएका किसाहरुको समस्यालाई समधान गर्ने उदेश्य राखिएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं.१०ले आफ्नो वडाको प्रोफाइलन निर्माण गरेको छ । हरेक वर्ष गरिने आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई प्रोफाइलका माध्यमबाट काम गर्न सहज होस भन्ने उदेश्यका साथ प्रोफाइल तयार गरिएको छ । हरेक घरधुरीमा नम्बर प्लेट टाँस गरिएको छ । जसका कारण विकास निर्माणका साथै अन्य वडाबाट दिनुपर्ने सेवासुविद्याका लागि सहज हुनेछ ।
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १०का सबै टोल बस्तीमा विद्युत पुगिसकेको छ । जनताको मागका आधारमा सबै टोलबस्तीहरुमा उक्त विद्युतका लागि पोल तारका लागि विद्युत कार्यालयसंग सहकार्य गरि आफ्नो कार्यलाई अगाडी बढाइरहेको छ ।
जनतासंग जनप्रतिनिधी कार्यक्रम :
कोहलपुर नगरपालिकाले हरेक ३ महिनाको १ पटक जनतासंग जनप्रतिनिधी कार्यक्रम राखेको छ । जसका कारण जतनाले प्रत्येक्ष रुपमा आफ्नो टोल बस्तीमा भएका समस्यालाई सहजै रुपमा राख्न सहज होस भन्ने उदेश्यले उक्त कार्यक्रम राखिएको छ । वडा नं. १० मा जनतासंग जनप्रतिनिधी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जनताका आवाजहरु र भएका समस्याहरु खुलस्तै राख्दै आएको र उक्त समस्याहरुलाई सहजै र छिटो आफुले पुरा गर्दै गइरहेको वडा अध्यक्ष चलाउने बताउछन् ।
कृषि क्षेत्रमा हामीले सोचअनुरुप काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । सरकार कृषि क्षेत्रमा जति लगानी गर्नुपर्ने हो सोही अनुसार बजेट बिनियोजन नहुनु मागका आधारमा कृषकहरुले पाउने सेवा सुविद्या नपाउदा बजेट अभावका कारण काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । कृषि क्षेत्रमा आवद्ध भएका किसानहरुलाई बिऊ बिजन वितरण र किसानहरु प्रशिक्षण र परामर्श गरिरहेका छौँ । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० का कृषकहरुका लागि बाँकी रहेको कार्यकालमा केही गुरुयोजना तयार गरी अगाडी बढ्ने लक्ष्य राखेका छौँ । जनताका मागहरु सबै एकैपटक आउने भएका कारण सबै क्षेत्रमा काम गर्न ग्राहो हुने भएकाले क्रमश सबै क्षेत्रको विकास र उन्नतीका लागि हामी निरन्तर लागि परेका छौँ । कोहलपुर नगरपालिकाले वडामा कृषी क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिनियोजित हुनुपर्ने रकम बिनियोजित नगर्दा समस्या आएको छ । नगरपालिकाको कमजोरीका कारण हामीले कृषकका मागहरुलाई सम्वोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ । यो यर्थात हो ।
सेवाग्राहीको काम तिव्र गतिमा :
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं.१० मा सेवाग्राहीहरुले झन्झट , दुख भने खेप्नु पर्दैन । सेवाग्राहीका काम कारवाहीहरु तत्काल गर्नुका साथै परामर्श र सुझाबका लागि पनि वडा कार्यालय निरन्तर तयार देखिन्छ । सेवाग्राहीका कामहरु छिटो र छरितो रुपमा गर्नाले पनी वडा कार्यालयमा गुनासा र दुख नपाएको वडाबासीहरु बताउछन् । वडा कार्यालयमा रहेका कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुको सक्रियता, लगनशिलताका कारण पनी उक्त वडा कार्यालयमा कामको गति भने तिव्र भएको वडा सदस्य ओमप्रकाश वर्णवाल बताउछन् ।
चुनावमा घोषणा गरेको बाचा पुरा गर्छु :
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १०का वडा अध्यक्ष निम बहादुर चलाउने (निरज)ले आफुले चुनावको समयमा घोषणा गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्ने बताएका छन् । बजेट अभावका कारण कतिपय योजनाहरु सोचेअनुरुप नभएको तर पनी संघ, प्रदेशबाट आफ्नो वडामा सहयोग भइरहेको र आगामी दिनमा जनताका समस्या र विकास निर्माणमा पारर्दशिताका साथ काम गर्ने बताएका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाबाट बिनियोजित भएका बजेटहरु सिमित मात्रामा भएतापनी जनताको आंकक्षा र चाहाना र आवश्यकताहरु धेरै भएकाले अझै सोचेअनुरुप काम गर्न बजेटले साथ नदिएको अध्यक्ष चलाउनको गुनासो रहेको छ । आफ्नो बाँकी रहेको कार्यकालमा वडाको मूहार फेर्नका लागि रातदिन लागिपरेको बताए ।
११ माघ २०७७ मा प्रकाशित